कस्तो अचम्म जहाँ रुखमै युवती फल्छन् | Suchana Daily
कस्तो अचम्म जहाँ रुखमै युवती फल्छन्
रुखमै कसरी निर्वस्त्र युवतीहरु झुण्डिए ?
संसारमा यति धेरै रहस्यहरु छन् जसको सत्यता पत्ता लगाउने अझै मानवका लागि सम्भव बनिसकेको छैन । प्रकृतिको यस्तो अनौठो रहस्य मध्ये एक थाइल्याण्डको जंगलमा पाइने एउटा रुख । त्यो रुख यस कारण पनि आश्चर्य लाग्दो जुन रुखमा फल्ने फलको हामीले अहिलेसम्म कल्पना नै गर्न सकेका छैनौ । त्यो रुख यस्तो छ की रुखमा युवती फल्छन् । युवती फल्ने रुख थाइल्याण्डको हिमाफन जंगलमा पाइन्छ । यदि तपाई एक्लै त्यो जंगलमा पुग्नुभयो र रुखमा युवती झुण्डिरहेको दृश्य देख्नुभयो भने पक्कै तपाई तर्सिनु हुनेछ । नेरिफन नामको त्यो रुखमा युवतीहरु निर्वस्त्र झुण्डिरहेको देखिन्छ ।
अलि टाढाबाट हेर्दा रुखमा झुण्डिएका ती फल कसैले युवतीहरुलाई सजाय दिएर झुण्डाइरहेको जस्तै देखिन्छ । थाइल्याण्डको जंगलमा कसरी यस्तो भयो ? जुन कुराको यथार्थ अझै बाहिर आउन सकेको छैन । हरियो रंगमा फल्ने सो फलको आकारप्रकार सम्पुर्ण रुपले युवतीसँग मिल्दोजुल्दो छ । यी फलमा बारेमा थाइल्याण्डमा केही धार्मिक मान्यताहरु पनि रहेका छन् । जस अनुसार भगवान बुद्धले यी रुखहरु रोपेका हुन् । त्यहाँ चलिआएको मान्यता अनुसार जब मानिस बुद्धले देखाएको सत्मार्गको बाटो हिड्न छोड्छन् त्यसपछि यी फलका प्रजाती पनि नासिएर जान्छन् ।
अर्को मान्यता अनुसार इन्द्र भगवानकी पत्नी भेसान्तारा दुई सन्तानलाई छाडेर काठ ल्याउन जंगल गएकी थिइन् । त्यतिबेला उनीमाथि आक्रमणको प्रयास भयो । त्यसपछि इन्द्रले नेरीफन नामक १२ वटा विशेष फलफूल तयार पारे । त्यसमध्ये एउटा फल आफ्नै श्रीमतीको शारीरिक बनावटसँग मिल्दोजुल्दो बनाए । थाई किंवदन्ति अनुसार त्यसपछि निरन्तर रूखमा युवतीको आकारको फल फल्दै आएको छ । नेरिफनको रुखमा फल्ने त्यो निर्वस्त्र युवतीको स्वरुपको फल केवल ७ दिनसम्म मात्र रहन्छ ।
बंगलादेशी प्रधानमन्त्री बिमस्टेक नसकिँदै स्वदेश फर्किने
दाङमा पहिलो पटक कार जस्तै अटो रिक्सा भित्रियो
बजारै भरी ‘रातो साडी'( भिडियो सहित हेर्नुहोस)
राज केसी र गीता क्षेत्रीको सर्वोकृष्ट अभिनय ”माया गर्नु भुल रहेछ” भिडियो सहित
विश्व पर्यटन दिवसको अवशरमा रक्तदान